LUNGISA WINDOWS 10 UBAMBEKILE KWISCREEN SOKWAMKELA OKANYE UKULAYISHA ISIKRINI EMVA KOKUNGENA - ITHAMBILE
Lungisa Windows 10 Ubambekile kwiscreen sokwamkela okanye ukulayisha isikrini Emva kokungena
Igqityelwe ukuhlaziywa Nge-17 ka-Epreli 2022 0
Ngaba uqaphele Emva kokungena kwiakhawunti yomsebenzisi Windows 10 Ubambekile kwiSkrini sokuLamkelwa ? okanye iifestile ubambekile ekulayisheni isikrini ixesha elide? Inani labasebenzisi beWindows banika ingxelo ngakumbi emva koKutsha nje Windows 10 kaOktobha 2020 uhlaziyo Isangqa sokulayisha asikwazi ukuyeka kwaye inkqubo ayiphenduli kwizenzo zabo.
Ubambekile kwiscreen sokwamkela inokubangelwa yimiba yokuqalisa ukusilela, isoftware engahambelaniyo, ukusilela komqhubi, isoftware ephelelwe lixesha, iirejistri ezonakeleyo. Nantoni na esuka kuhlaziyo lwenkqubo engalunganga ukuya kwenye ingxaki yesoftware inokubangela Windows 10 ikhompyuter ibambeke kwiscreen sokwamkela. .
Windows 10 wanamathela wamkelekile emva kohlaziyo
Kwezinye iimeko, indawo yokufaka igama eligqithisiweyo ilahlekile, kwezinye iimeko, ibhodi yezitshixo ilahlekile okanye igama lokugqitha alamkelwa. impuku ibonakala nje kwikhusi elimnyama elinesangqa esizuba esijikelezayo. Ukuba kwenzeka okufanayo nakuwe, zama ezi zilungiso zilandelayo.
Okokuqala Yiba nomonde kwaye ulinde de ulayishe iprofayile yomsebenzisi ngokuthobelayo, Emva koko Yenza ezi zisombululo zilandelayo ukuThintela le ngxaki. Okanye ukuba uyaqaphela iSkrini esamkelekileyo esiNxibele ixesha elide (ngaphezulu kwe-30 min ) ngoko kufuneka ufikelele kwiinketho eziphezulu ukulungisa ezi ngxaki zokuqalisa.
Ukufikelela kwiiKhetho eziPhezulu
Windows 10 kunye ne-8.1 ibandakanya i-Windows Startup Settings okanye Ukuqaliswa okuphezulu iinketho ezaziwa ngaphambili njenge Iinketho zokuqalisa ezikwinqanaba eliphezulu enokukunceda ukuba uxazulule ingxaki, uxilonge, kwaye ulungise iPC yakho ukuba ineengxaki zokuqalisa okanye ukulungisa imiba yokuqalisa. Ukusuka Apha unokufikelela kwii-Windows zokuxilonga kunye nezixhobo zokulungisa ezifana nokuSeta kwakhona le PC, ukuBuyiselwa kweSistim, i-Command Prompt, ukulungiswa kokuQalisa, kunye nokunye okuninzi. Jonga ukuba njani ukufikelela Iinketho eziphambili kwiifestile ze10 .
Yenza ukulungiswa kokuQalisa
Xa ukwiNqanaba iinketho Isikrini cofa kwindawo yokuQalisa ukulungisa. Ukuba nayiphi na ifayile yenkqubo yoRhwaphilizo okanye isicelo sinqanda umsebenzisi wakho ekungeneni windows Ulungiso lokuQalisa kwaye uzilungise. Ulungiso loQalo luya kuskena inkqubo yakho kwaye ihlalutye useto olwahlukeneyo, iinketho zoqwalaselo, kunye neefayile zenkqubo njengoko ijonge iifayile ezonakeleyo okanye useto oludityanisiweyo loqwalaselo. Ngokukodwa ngakumbi, ukulungiswa kokuQalisa kuya kukhangela ezi ngxaki zilandelayo:
Abaqhubi abakhoyo/abakhohlakeleyo/ abangahambelaniyo
Iifayile zenkqubo ezilahlekileyo/zonakele
Akukho/kurhwaphiliza imimiselo yoqwalaselo lwesiqalo
Urhwaphilizo lwemimiselo yobhaliso
Urhwaphilizo lwemetadata yedisk (irekhodi yokuqala yokuqalisa, itafile yokwahlula, okanye icandelo lokuqalisa)
Ufakelo lohlaziyo oluyingxaki
Emva koko Qala kwakhona windows ngesiqhelo kwaye ungene kwi-akhawunti yomsebenzisi utshekishwa, akusekho kungena kulibazisa, Gxila kwiscreen sokwamkela njl.njl.
Yenza iMiyalelo ePhezulu yokuQeqesha iitshekhi zesistim
Ukuba ukwenza uLungiso loQoqosho aluphumelelanga ukulungisa iNgxaki Ke kusenokubakho nayiphi na ifayile yenkqubo eyonakeleyo, impazamo yeDiski yeDrayivu, iBootmgr ilahlekile, iBuggy windows uhlaziyo olubangela windows 10 wanamathela wamkelekile Screen . Phinda wenze iinketho ezikwiNqanaba eliphezulu Cofa kwi-prompt yomyalelo kwaye wenze iBellow imiyalelo nganye ukulungisa iingxaki zokuqalisa ezahlukeneyo.
Ukulungisa kunye nokwakha irekhodi yokuqalisa eyinkosi kunye neengxaki zeBoot mgr yenza imiyalelo ngezantsi
Emva koko Yenza i-Command Bellow ukuskena kwaye ubuyisele Iifayile zenkqubo ezonakeleyo Ezilahlekileyo kwaye Jonga iDiski Drive yeempazamo kumacandelo amabi.
Linda de i-100% igqibe inkqubo yokuskena, Emva kolo hlobo lokuphuma komyalelo ukuvala umyalelo kunye nokuQalisa kwakhona iifestile. khangela Akusekho ngxaki yokuQalisa okanye i-Windows stuck Kwiskrini sokwamkela. Ndisenomcimbi ofanayo ngoko Qalisa kwimo ekhuselekileyo ukwenza amanye amanyathelo okusombulula ingxaki.
Susa ii-Aplikheshini eziFakelwe zakutsha nje
Ukuba le ngxaki iqalile Emva kokufaka isoftware eNtsha, Faka iSicelo esitsha soMqhubi okanye i-antivirus ngoko, esi sicelo sifakiweyo sinokubangela ingxaki ukunqanda umsebenzisi ukuba angene kwiifestile. Kule nto, kufuneka ukhuphe inkqubo, emva koko uvavanye inkqubo yakho.
Ukukhupha / Ukukhupha naluphi na usetyenziso lwakutsha nje Cinezela Windows + R, chwetheza appwiz.cpl kwaye ucofe iqhosha lokungena. Oku kuya kuvula udweliso lweenkqubo kunye neempawu zefestile apha nqakraza-ekunene kwisicelo esifakwe mva nje kwaye ukhethe ukukhupha.
Yenza i-Boot ecocekileyo
Ngamanye amaxesha isoftware yomntu wesithathu oyisebenzisayo IiWindows inokubangela lo mba, Thintela iWindows iqale ngokuqhelekileyo, Windows 10 Ubambekile Kwisikrini esamkelekileyo njl. Ukuba usebenzisa izixhobo ezininzi zomntu wesithathu, kufuneka uzame i-boot ecocekileyo .
Ukwenza oku Cinezela ngokulula Windows + R, chwetheza|_+_| kwaye ucofe iqhosha lokungena. Emva koko uye kwi Iinkonzo ithebhu kwaye ujonge Fihla zonke iinkonzo zikaMicrosoft kwaye ucofe Khubaza zonke iqhosha. Qalisa kwakhona kwaye ujonge imeko yomba. Unokwenza kwakhona eli nyathelo-bulumko, kwiprogram nganye, enye-nganye ikhubaza iinkonzo ezihambelanayo kwaye uhlale ukhangele ukuba umba uyasombulula.
Seta kwakhona i-Windows Update Components
Ukuba emva kokwenza Zonke izisombululo zisekhona, uyaqaphela Ikhusi Lokwamkela liValelekile, windows login Thatha ixesha lokungena. Ngokukodwa ukuba emva kokufaka uhlaziyo lwamva nje windows ubambekile ekulayisheni isikrini Emva koko kunokubakho uhlaziyo lwebuggy olubangela umba. Eso sizathu zama Uku cwangcisa kwakhona iiwindow zohlaziyo amalungu ngokulandelayo.
Ukwenza lo myalelo vula ngokukhawuleza njengomlawuli Emva koko yenza Umyalelo we-Bellow nganye-nganye ukuseta kwakhona iiwindow zohlaziyo lwamacandelo kucwangciso lwayo olungagqibekanga.
i-net stop bits
umnatha stop cryptsvc
Ren% systemroot%SoftwareDistribution SoftwareDistribution.bak
Ren % systemroot%system32catroot2 catroot2.bak
amasuntswana okuqala anetha
net qala wuauserv
net qala appidsvc
isiqalo sokuqala cryptsvc
Ngoku qalisa kwakhona iPC/laptop yakho kwaye ujonge ukuba isikrini esincamatheleyo sihambile.
Vula iAkhawunti yoMlawuli efihliweyo
Kwezinye iimeko, unokuncamathela kwi Wamkelekile isikrini ukuba iakhawunti yakho yomsebenzisi yonakele. Ngoko zama ukungena kwenye iakhawunti yomsebenzisi kumatshini. Ngale nto, uya kuba nakho ukungena ngaphakathi WENA ukulawula iakhawunti yomsebenzisi eyingxaki. Okanye ukuba awunayo enye iakhawunti yomsebenzisi, landela nje esi sikhokelo yenza iakhawunti yomlawuli efihliweyo .
Yenza uvavanyo lweDisk Surface
Kwakhona Ukuba hard drive yakho inamacandelo amabi, kusenokwenzeka ukuba ukuhlangabezana Windows 10 ibambekile ekulayisheni isikrini khupha. Uyacetyiswa ukuba usebenzise isoftware yomphathi wokwahlulahlula, njengaye IWizard yeSahlulo seMiniTool ukwenza uvavanyo lomphezulu wedisk kwaye ukhusele amacandelo amabi. Emva koko, ungaqala kwakhona ikhompyuter yakho ngokwesiqhelo.
Ezi zezona zisombululo zisebenzayo zokulungisa iingxaki ze-Windows Startup. Bandakanya windows 10 zixinge ekulayisheni isikrini ngengxaki yesangqa esijikelezayo. Ndiyathemba ukusebenzisa ezi zisombululo ukulungisa iingxaki ezahlukeneyo zokuQala, zibandakanya Windows 10 ibambelele kwiscreen esamkelekileyo , iWindows ibambekile kwisangqa esijikelezayo njl.njl.
Iindlela ezi-7 zokulungisa windows 10 isikrini esimnyama ngekhesa emva kokungena
Izinto ekufuneka zenziwe nini Windows 10 ayiphumelelanga ukuqalisa 0xc000000f
Lungisa kwaye Ulungise Windows 10 Iingxaki zokuQalisa
Lungisa iMicrosoft Store ayizuvula ikhowudi yempazamo 0x80070422 ngaphakathi Windows 10
7 Amanyathelo asisiseko okulungisa iingxaki zeWindows 10